Dhaqangelinta CCPA ayaa hadda bilaabanaysa, shirkadaha badankooduna diyaar uma aha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Dhaqangelinta CCPA ayaa hadda bilaabanaysa, shirkadaha badankooduna diyaar uma aha
Dhaqangelinta CCPA ayaa hadda bilaabanaysa, shirkadaha badankooduna diyaar uma aha
Xeerka Qarsoonnimada Macmiilka California (CCPA) waxa uu dhaqan galay Janaayo 1, 2020 iyada oo leh muddo lix bilood ah oo meel marin ah. Taariikhda dhamaadkaas hadda waa halkan
Aasaaska. Dib-u-cusboonaysiin ahaan, CCPA waxay si cad u khusaysaa shirkadaha u qalma hoos hal ama in ka badan oo ka mid ah shuruudaha soo socda:
Hayso dakhli sanadeedka guud oo ka badan $25 milyan;
Hayso macluumaadka gaarka ah ee 50,000 ama in ka badan macaamiisha, guryaha, ama qalabka; ama
Ka hel in ka badan kala badh dakhligooda sannadlaha ah iibinta macluumaadka gaarka ah ee macaamiisha
Tiro ka mid ah qaybaha ganacsiyada ayaa si cad looga dhaafay u hoggaansanaanta CCPA, oo ay ku jiraan warshado gaar ah oo ay hoos yimaadaan xeerarka federaalka. Si kastaba ha ahaatee, daabacayaasha badankoodu waxay u baahan doonaan inay diyaar u ahaadaan si ay ugu suurtageliyaan macaamiisha Mareykanka inay ka baxaan wareejinta xogta qolo saddexaad oo ay muujiyaan u hoggaansanaanta maamulayaasha haddii ay dhacdo baaritaan ama cabasho.
Qareen Aaron Tantleff, oo ah shuraako ka ah shirkadda sharciga Foley & Lardner, ayaa bixisa rajo yar oo ah in CCPA aysan khuseyn qof walba, iyadoo ka digaysa in sharcigu leeyahay xuduudo juqraafi ah. "Waxaan la hadalnay macaamiil badan oo ku soo wacay argagax si ay u ogaadaan in CCPA aysan khusayn. Ku dhaqmida CCPA, sida GDPR, kuma koobna oo kaliya ururada fadhigoodu yahay California. Waxa laga yaabaa inay khusayso hay'adaha aan wax joogitaan ah ka lahayn Gobolka."
Codsiga ballaaran ee ganacsiyada adduunka oo dhan. Arrin la taaban karo sharcigu wuxuu si ballaaran u quseynayaa ganacsiyada ganacsiga intooda badan, haddii ay si cad u beegsanayaan dadka deggan California iyo haddii kale. Tusaale ahaan, falanqaynta hore ee sharciga ee IAPP waxay leedahay:
Shirkaduhu waxay u gudbin karaan heerka [xogga gaarka ah ee 50,000 macaamiisha] si ka dhakhso badan sidii la filayey sababtoo ah baaxadda macluumaadka shakhsiyeed waa ballaadhan yahay. Shirkadaha intooda badani waxay shaqeeyaan mareegaha waxayna si lama huraan ah u qabtaan cinwaannada IP-ga. Waxaa xusid mudan, shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay u hoggaansamaan iyada oo aan loo eegin haddii degelku bartilmaameedsanayo ganacsiyada ama macaamiisha gaarka ah ee California marka loo eego in ereyga "macmiilka" lagu qeexay inuu ula jeedo "degane". Xitaa bloggers shakhsi ahaaneed iyo ganacsiyo yaryar oo ka baxsan California waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay hubiyaan inaysan helin macluumaadka shakhsiyeed ee ka badan 50,000 dadka deggan California ee soo booqda boggooda sannadkiiba, si fudud looga heli karo halkaas, iyo, California gudaheeda, inta badan. tafaariiqleyaasha, istuudiyaha jimicsiga, goobaha muusiga iyo ganacsiyada kale ayaa buuxin doona heerkan.
Khatarta u hoggaansanaan la'aanta. Xeer Ilaaliyaha Guud ee California wuxuu ku soo rogi karaa ganaax lacageed ilaa $2,500 xadgudubyada aan ula kac ahayn iyo $7,500 xadgudubyada ula kac ah. Laakiin tirooyinkani si dhakhso ah ayey u badin karaan haddii kumanaan ama malaayiin isticmaalayaashu ay lug ku yeeshaan. Inta badan ma jiri doonto wax mas'uuliyad ah marka xadgudubku "daaweeyo" 30 maalmood gudahooda marka la helo ogeysiis. Waxa kale oo jira xuquuq gaar ah ama mid gaar ah oo ficil ah marka macluumaadka shakhsiyeed si khaldan loo shaaciyo iyada oo la raacayo CCPA. (Dacwacdii ugu horreysay ee fasalka CCPA [.pdf] waxa la xareeyay bishii Febraayo ka dhanka ah Hanna Andersson iyo Salesforce.)
Marka loo eego sahan dhowaan Ethyca ah oo lagu sameeyay 218 la-talin guud oo shirkadaha tignoolajiyada ah, 56% waxay sheegeen inaysan "u diyaarsaneyn sharciyada gaarka ah ee cusub ee imanaya adduunka," oo ay ku jirto CCPA. Inta lagu guda jiro bilaha ka hor dhamaadka kama dambaysta ah ee fulinta, 43% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay inay ka horyimaadeen diyaargarowga qarsoodiga COVID-19 dartiis. Sahanka ayaa sidoo kale lagu ogaaday in la'aanta ama kharashku ay tahay caqabadda ugu weyn ee u hoggaansanaanta.
Maxaa la sameeyaa hadda. "Ganacsatada weli raadinaya inay xoojiyaan u hoggaansanaanta, waxa lagama maarmaanka ah - oo keliya - tallaabada ugu horreysa waa in la ogaado xogta shakhsiyeed ee aad haysato iyo halka ay ku nooshahay," Cillian Kieran, maamulaha Ethyca ayaa yidhi. "Kadib marka aad dhisto khariidad xog ah oo leh diiwaan dhamaystiran oo dhamaystiran xogta aad hayso, iyo halka ay ku nooshahay, waxaad ka welweli kartaa inaad dejiso qaab-dhismeedka si aad wax uga qabato hawlaha kala duwan ee u hoggaansanaanta. Laakiin wax walba waxay ka bilowdaan khariidada.”
Qareenka Tantleff wuxuu ku daray, "Wax walba diiwaangeli. Hadda, ururradu waa inay dejiyaan tallaabooyin ammaan oo adag. Si kastaba ha ahaatee, marka loo eego CCPA, ururku waa inuu muujiyaa inay hirgelisay tillaabooyin ammaan oo macquul ah oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo macluumaadka shakhsiyeed iyadoo lagu salaynayo dabeecadda iyo dareenka macluumaadkaas."
Sida laga soo xigtay Lisa Rapp, VP ee Anshaxa Xogta ee LiveRamp, "Shirkadna waa inay isku dayaan inay tan sameeyaan keligood. Waxa ugu fiican ee la sameeyo waa in la helo macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah adiga oo akhrinaya waxa ay leeyihiin hoggaamiyeyaasha warshadaha, la socoshada qalabka ay soo saaraan kooxaha sida IAPP iyo IAB, iyo in la gaaro shirkadaha sharciga ee caanka ah ee wax ka qabta. oo leh xog gaar ah si ay u helaan lataliyahooda sharciga ah iyo fasiraadda sharciga."
Julie Rubash, VP of Legal at Nativo, waxay ku talinaysaa in daabacayaashu akhriyaan xeerarka u dambeeya ee Xeer Ilaaliyaha Guud "si loo hubiyo in qorshayaasha [sirta ah] ee hadda jira ay waafaqsan yihiin fasiraadda Xeer Ilaaliyaha Guud." Waxay ku dartay "Aaladaha sida Qaab-dhismeedka IAB CCPA waa tallaabo loo qaaday jihada saxda ah ee loogu diyaar garoobayo weydiinta laguna xaddidayo carqaladeynta dakhliga. Daabacayaasha ka faa'iidaysta IAB CCPA Qalabka Qaabdhismeedka U Hogaansanaanta oo saxeexa heshiiska adeeg bixiyaha xaddidan uma badna inay la kulmaan saameyn la taaban karo qaab ganacsigooda."
Abby Matchett, Hogaaminta Falanqaynta Ganacsiga ee Bounteous, ayaa yidhi, "Sababtoo ah CCPA waxay qaadataa aragti aad uga ballaadhan xogta shakhsiyeed marka loo eego tilmaamaha GDPR ee Yurub, shirkadaha intooda badani waa inay sameeyaan kayd gudaha ah oo muhiim ah oo xog kasta oo lala xiriirinayo, si toos ah ama si dadban, macaamilka. ama guriga. Samaynta alaabada noocan oo kale ah waxay culays wayn saaraysaa ururada IT-ga, waaxaha sharciga, iyo falanqeeyayaasha xogta kuwaas oo laga yaabo inay horeba ugu heellan yihiin mudnaanaha kale ee gudaha. Ka gudubka caqabadan waa mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ee loo hoggaansamo laakiin inta badan waa tan ugu adag in la isku duwo oo si buuxda loo diiwaangeliyo. "
Mattchett oo sii sharraxaya, "Haddii aad ka walaacsan tahay inaadan haysan wakhti aad ku dhisto xal dhijitaal ah oo guriga lagu koray ujeedadan, tixgeli inaad la xiriirto maamulaha Oggolaanshaha Kukiyada ee shirkadaha software ee ku takhasusay ilaalinta CCPA & GDPR xalalka diyaarsan. Qaar ka mid ah maareeyayaasha Oggolaanshaha caadiga ah waxaa ka mid ah TrustArc, OneTrust, iyo Quantcast, iyo kuwo kale."
Halkan waxaa yimaada CPRA. Xataa iyadoo shirkado badan ay ku dhibtoonayaan inay u hoggaansamaan CCPA, hindise cusub oo cod-bixineed ee Noofembar California wuxuu soo rogi karaa xitaa sharciyo gaar ah oo adag haddii la ansixiyo. Marka loo eego Future of Privacy Forum's Katelyn Ringrose, "Iyadoo laga yaabo inay shirkaduhu bilaabeen, iyo xaaladaha qaarkood, waxay soo gabagabeeyeen barnaamijyo u hoggaansanaan xooggan iyo dadaallada wax looga qabanayo CCPA-Xeerka Xuquuqda Gaarka ah ee California (CPRA), oo dhowaan la xaqiijiyay codbixinta 2020, waxay yeelan kartaa taariikhda dhaqangelinta horraantii 2023, oo saaraya waajibaadyo dheeraad ah hay'adaha la daboolay. CPRA waxay abuuri doontaa kala saarid xog xasaasi ah, waxay saaraysaa waajibaadyo dheeraad ah soo-saareyaal, waxayna u baahan doontaa samaynta Hay'adda Ilaalinta Qarsoon ee California."
Sababta aan u danayno. Tiro badan oo macaamiil ah ayaa walaac ka muujiyay sida xogtooda loogu maamulo khadka. Laakiin waxaa jira caddayn ah in "horumar gaar ah u leeyahay" shirkaduhu ay arkayaan faa'iidooyinka summadaha iyo maaliyadda labadaba, marka la eego kalsoonida macaamiisha oo weyn iyo xitaa kobaca dakhliga.
Waa nacasnimo in dib loo dhigo qaadashada tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo kala hormariyo sirta iyo amniga xogta. Sida Tom O'Regan, Maamulaha Madison Logic u dhigay, "Ugu dambayntii, u hoggaansanaanta kontaroolada CCPA aad ayay uga jaban tahay ciqaabta ka timaada u hoggaansanaan la'aanta."
Maalinta Khamiista ee Dhulka Matoorka Raadinta waxay noqon doontaa CCPA gaar ah iyo dood sir ah oo soo bandhigaysa Lisa Rapp, Anshaxa Xogta VP, LiveRamp, Abby Mattchett, Hogaaminta Falanqaynta Ganacsiga, Bounteous, Katelyn Ringrose, qareen, Mustaqbalka Madasha Qarsoonnimada.
Waxay bilaabataa 1:00 pm EDT waxayna u ogolaan doontaa ilaa 100 qof inay kulanka soo galaan si ay ula kulmaan doodda si toos ah oo ay su'aalo u waydiiyaan. Haddii aad tahay suuqgeyn dijital ah ma awoodid inaad tan seegto. Halkan iska diiwaan geli.
6 xaqiiqooyinka aasaasiga ah ee SEO in lagu noolaado
WSJ: GoogleBot waxay ku dari kartaa alaabada gawaarida wax iibsiga